विचार / विश्लेषण लोकसंगीत अध्येतासँग देउसी संवादः मगर सेनाबाट सुरु भयो देउसी
Thursday, 27 Oct, 2016 12:18 PM
संखुवासभाको अरुण उपत्यका क्षेत्रका वासिन्दा नवीन खड्का नेपाली लोक संस्कृति र लोकसंगीत क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन गरेका अध्येता हुन् । नेपाली लोकसंगीत संकलनमा छुट्टै स्थान बनाएका उनी नेपालमा मात्रै होइन भारतको दार्जिलिङ पहाड, सिक्किम, भुटान, असम हुदै बर्मासम्मका लोकसंस्कृतिहरुको खोज, अनुशन्धान र गायन कलामा प्रख्यात छन् । नेपाली लोक संगीतको अध्ययनका लागि अरुण उपत्यका भन्ने संस्था नै खोलेर अभियान चलाइरहेका नवीन र उनको अभियानकी सहयात्री पुस्तका खड्कासँग देउसी भैलो बारे चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
तिहारमा देउसी खेल्ने प्रचलन नेपालमा कहिलेबाट सुरु भएको हो ?
देउसी लोकभाका मगर जातिको लोक संस्कृतिबाट सुरु भएको हो । देउसी खेल्ने चलन कसरी सुरु भयो भन्ने रोचक कथा छ । देउसीमा बजाइने मुख्य बाजा मादल हो जुन मगर जातिले आविश्कार गरेका थिए । मादलसँगै उनीहरुले दुईवटा पुख्र्यौली नाचको बिकास गरे । एउटा मारुनी र अर्को देउसी नाच । मारुनी र देउसी सभ्यता मगर जातिबाट विकास भएको हो । मारुनी नाचको विकास मगर जातिले गरे पनि यसको सुरुवात कुमाल र माझी जातिबाट भएको थियो ।
देउसीको सुरुवात कसरी भयो त ?
देउसी भन्दा अघि मारुनी नाचबारे केही बुझ्नु पर्छ । गण्डक सभ्यताबाट सुरु भएको सोरठी लोकनाच पछि पूर्बी नेपालसम्म फैलिंदै गयो । यस नृत्यलाई पछि पूर्बी नेपालका मगर जातिले कोशी सभ्यतामा प्रचलित मारुनी लोकसंस्कृतिमा मर्ज गरे र यसले पूर्बीय सभ्यतामा निरन्तरता पायो ।
दार्जिलिङ र सिक्किमको बीचबाट बग्ने रंगीत नाम गरेको एउटा नदि छ । त्यस नदिको पश्चिम देखि अरुण नदिसम्म लिम्बु जातिको घना बस्ती थियो । जुन क्षेत्रलाई लिम्बुवान क्षेत्र भनिन्छ । त्यस क्षेत्रमा परापूर्वकालमा बलिहाङ नाम गरेका एक किरात राजा थिए । जसका विश्वास पात्र सेना सबै मगर थिए । ती राजा एकदमै धर्मात्मा थिए । उनी धेरै समय पूजापाठमा विताउँथे । राजकाज भन्दा बढी उनी ध्यान र तपस्यामा हुन्थे ।
हिन्दु धर्म होइन, दर्शन र सभ्यता हो । जसलाई हिन्दु धर्म भनिंदै आएको छ त्यो सनातन धर्म हो । भैलेनी पूर्वीय सभ्यताको एउटा अंश हो ।
बलिहाङ राजा ध्यानमा रहेका बेला छिमेकी देशका सेनाले लिम्बुवानमाथि आक्रमण गर्यो । मगर सेनाले त्यो आक्रमणलाई पराजीत गरे । तर यो कुरा बलिहाङलाई थाहा थिएन । मगर प्रयुक्त भाषामा डेउसी–रे–फाइलोको अर्थ हामीले–राजा–बचायौँ भन्ने हुन्छ । सोहि डेउसी–रे–फाइलो कालन्तरमा अपभ्रंश भइ देउसीरे हुन गएको हो । मगर सेनाहरुले डेउसी–रे–फाइलो, डेउसी–रे–फाइलोे भन्दै कराएको सुनेर वलिहाङ राजाले के भएको हो भनि सोधे ? प्रत्युत्तरमा सेनाले राजालाई सबै घटनाको इतिवृतान्त सुनाए । मगर सेनाको कुरा सुनेर राजा वलिहाङ अत्यन्त प्रसन्न भए र उनले यो सन्देश अब देशैभरी फैलाउ भनि आदेश दिए । बलिहाङ राजाले आदेश दिएपछि मगर सेना घरघरै देउसुरे फाइलो भन्दै हिंड्न थाले । पछि यसले देउसी लोक नृत्यको बृहत रुप लियो र आजसम्म निरन्तरता पायो । देउसी भट्याउँदा नछुटाइकन बलि राजाले पठाए भनिन्छ । बलि राजा भनेका तिनै बलिहाङ राजा हुन् । ‘हामी त्यसै आएका होइनौ, बलिमा राजाको हुकुमै हुँदा’ भन्ने चलन अझै छ । त्यसबेला बलिहाङ राजाको आदेशले चलाएको चलन हरेक वर्ष त्यही समयमा अपनाउन थालियो । त्यही संस्कृति पूर्वबाट पश्चिमसम्म पुग्यो ।
भैलेली गाउने चलन चाहीँ कसरी आयो त ?
भैलेनीका विषयमा विभिन्न अध्ययनका बेग्ला बेग्लै निश्कर्ष छन् । भगवान विष्णुको पाँचौं अवतार बामनले त्रिलोकको राज्य जितेका बलिराजाको कथासँग पनि यसलाई जोडिन्छ । दानमा ख्याती कमाएका बलिराजासँग बामन अवतारका विष्णुले तीन पाउ जमीन भिक्षा मागेको । जमीन दिने वचन दिएपछि बामन अवतारले एउटा पाइला स्वर्ग, एउटा पाइला मत्र्य र अर्काे पाइला राख्ने ठाउँ नभएपछि बलि राजाको शीरमा राखेको कथा छ । बामन अवतारले बलिराजाको शीरमा पाइला राख्दा उनी पाताल भासिएको र बलिराजाका बहिनीहरुले मेरो दाइलाई नमारिदेउ भन्दै भैलेनी गाएको कथा छ । त्यसैले भैली पुरुषले खेल्दैनन् र मंगोल समुदायका मान्छेले पनि भैली खेल्दैनन् ।
मारुनी नाचको सुरुवात कुमाल र माझी जातिबाट भयो । पूर्बी नेपालमा भएका अरु संस्कृति समेटेर मगरहरुले सोरठी नाचलाई मारुनी नाचमा मर्ज गरे । पूर्बीय सभ्यतामा यसले निरन्तरता पायो ।
भनेपछि भैली हिन्दु धर्मावलम्बीले मात्रै खेल्छन् ?
तपाईंहरु स्पष्ट हुनुस्, हिन्दु धर्म होइन । हिन्दु दर्शन हो हिन्दु सभ्यता हो । पूर्वीयहरुले जसलाई हिन्दु धर्म भन्छन् त्यो सनातन धर्म हो । भैलेनी पूर्वीय सभ्यताको एउटा अंश हो ।
तपाईंहरु लोक संगीतको वजारमा त्यति देखिनु हुँदैन नि, देउसी भैलेनी जस्ता लोक गीतहरु कसरी रचना गर्नुहुन्छ ?
हामी गीतहरु रचना गर्दैनौं, संकलन गर्छाैं । विभिन्न समुदाय र संस्कृतिको अध्ययन गर्छाैं र उनीहरुको संस्कृतिमा भएका पक्षलाई संकलन गर्छाैं । र त्यसलाई हामी जस्ताको तस्तै रुपमा प्रस्तुत गर्छौं । संस्कृतिको लोकपन नछोपियोस् र नतोडियोस् भनेर हामी ध्यान दिन्छौं । अहिले बजारमा आएका गीतहरु लोकगीत होइनन् । हामी त्यतातिर लाग्दैनौं ।
देउसी भैलोमा पनि तपाईंहरुका बेग्लै परिकारहरु छन् पूर्वको शैलीका देउसी भैलो मात्रै तयार गर्नुहुन्छ ? लोक संस्कृति र लोक संगीतको अभियानमै हामीले देउसी भैलो पनि समावेश गरेका हौं । हामीले पूर्वको मारुनी सोरठी मात्रै होइन पश्चिमका सबै लोकभाकामा काम गरेका छौं । अभियानमा धेरैजसो पूर्व अरुण उपत्यकाको शैली समेटेका छौं । हाम्रो एउटै उद्धेश्य लोक गीत र लोक संस्कृति बाचइराख्ने हो ।
अहिलेसम्म यस्ता कतिवटा लोकगीत तयार गर्नु भयो ?
हामीले अहिलेसम्म पाँच सय वटा लोक गीत संकलन गरेर गाएका छौं । हामी कुनै पनि गीतको रचना गर्दैनौं । समाजमा जे छन् तिनै गीतको संकलन गर्छौं र तिनै संकलिी गीत गाउँछौं । ती गीतमा हामीले तयार गरेको भिडियो पनि सम्बन्धित ठाउँकै संस्कृति समावेश गरी टिपिकल बनाएका हुन्छौं । त्यसैले यो तिहारमा तयार गरेको देउसीको छायङ्ंकन हामी अर्काे साल मात्रै बाहिर ल्याउँछौं । किन भने तिहारको छायाङ्कन तिहारमै गर्नु पर्छ । कुनै वनावटी कुरालाई हामी भिडियोमा पनि राख्दैनौं ।
लोक गीत र लोक संस्कृति भनेको के हो त ?
लोक गीत र संस्कृतिको परिभाषा त्यति सजिलै सँग दिन सकिंदैन । मानव सभ्यताका मुख्य चार पाटा हुन्छन् । सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक र सांस्कृतिक । त्यस मध्येको मुल पाटो नै संस्कृति हो । संस्कृति भित्रै भूगोल अटाएको हुन्छ । संस्कृतिमा समाज अटाएको हुन्छ र सस्कृति भित्रै बिकास अटाएको हुन्छ । संस्कृति आफैमा आदिम कालको मानव सभ्यतालाई नेतृत्व गरेर आइरहेको हुन्छ । त्यसैले यसलाई सिमित शब्दबाट परिभाषा लगाउन सकिंदैन । संस्कृति नै नभए समाज समाज रहँदैन । त्यसैले समाजलाई गतिशील बनाइराख्न संस्कृति जोगाउनु आवश्यक छ ।
मगर प्रयुक्त भाषामा डेउसी–रे–फाइलोको अर्थ हामीले–राजा–बचायौँ भन्ने हुन्छ । सोहि डेउसी–रे–फाइलो कालन्तरमा अपभ्रंश भइ देउसीरे हुन गएको हो । मगर सेनाहरुले डेउसी–रे–फाइलो, डेउसी–रे–फाइलोे भन्दै कराएको सुनेर वलिहाङ राजाले के भएको हो भनि सोधे ? प्रत्युत्तरमा सेनाले राजालाई सबै घटनाको इतिवृतान्त सुनाए । मगर सेनाको कुरा सुनेर राजा वलिहाङ अत्यन्त प्रसन्न भए र उनले यो सन्देश अब देशैभरी फैलाउ भनि आदेश दिए ।
अहिलेका दोहोरी गीत लोकगीत हुन् कि होइनन् त ?
यी बजारमा आएका दोहोरी गीतहरु लोकगीत होइनन् । रोधी संस्कृति रहेका ठाउँमा दोहोरी गीत गाउने चलन थियो । त्रिशुली नदिबाट पश्चिमको गण्डक क्षेत्रमा त्यसलाई दोहोरी गीत भनिन्थ्यो । त्रिशुली नदि पूर्व यसलाई जुहारी भनिन्छ । लोक गीत सबै ठाउँको हुन्छ तर, गाउने शैलीले फरक पारेको हुन्छ ।
जव कि लोकगीतका भाकाहरु पनि ती सभ्यताबाट नै प्रभावित छन् । सभ्यतामा नदि नै किन जोडियो ?
जुन नदिनसँग जोडिएर सभ्यता विकास भएको हुन्छ र जुन क्षेत्रलाई त्यो सभ्यताले समेटेको छ त्यो सभ्यता त्यही नदिले सिंचाइ हुने क्षेत्र हो । तपाईंलाई भन्दा अनौठो लाग्ला– भारतको सिक्किम दार्जिलिङ, आसाम, मणिपुर र भुटानको केही भाग पनि कोसी सभ्यताबाट प्रभावित क्षेत्र हुन् । त्यहाँ पनि यिनै लोकगीत छन् हामी जुन गाउँछौं । यसो किन भयो भने यता इन्द्रवती देखि सुरु भएर कोसी नदि हुँदै समेटिएको क्षेत्र कोसी सभ्यतामा पर्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा मात्रै छैन टिष्टा नदि हुँदै भुटानसम्म पुगेको छ । नेपालको गण्डक क्षेत्रको अर्काे सभ्यता छ र त्यसबाट पश्चिममा अरु पनि नदिमा आधारित सभ्यता छन् । भिडियो हेर्नुहोस्:
हरियो भन्नु त्यहि रानीबन - देउसी लोकनृत्य (भिडियो)
भैलेनी आयौँ आगन - भैलेनी लोकनृत्य: